Geotextiles ဆိုတာ.... [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > မြို့ ပြအင်ဂျင်နီယာပညာ > Geotechnical and Geological Engineering > Geotextiles ဆိုတာ....
View Full Version : Geotextiles ဆိုတာ....
Geotextile ကို သိတဲ့လူများ ကူကြပါဦး? geotextileဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာပါလဲ?ဘယ်မှာ သုံးတာလဲ? ဘာအတွက် သုံးတာလဲ?ဘယ်လိုမျိူးသုံးတာလဲ?အမျိူးအစားတွေ ကွဲပြားသေးလား????? စသည်ဖြင့် ပြောပြပေးကြပါနော်။ (ဒီမှာ တိုင်ပတ်နေလို့ ပါ ;D).
geotextile ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်တာပါလဲ?
Geo မြေကြီးပတ်သက်တဲ့နေ၇ာတွေမှာသုံးတဲ့ Textile ပိတ်စ လိုမျိုးပေါ့နော်။
ဘယ်မှာ သုံးတာလဲ? ဘယ်လိုမျိူးသုံးတာလဲ?
* မြေသားရဲ့ stability ကိုလိုချင်တဲ့ အခါမှာသုံးပါတယ်။ Slope ကို Geotextile နဲ့ cover လုပ်ပြီး slope ၇ဲ့ stability ရအောင်လုပ်တာမျိုး။
* Ground Improvement လုပ်တဲ့ နေ၇ာတွေမှာလဲသုံးပါတယ်။ Reclamation (မြေသားအသစ်ဖို့ခြင်း) လုပ်ငန်းတွေမှာ ရွှံ့မြေတစ်ထပ် သဲတစ်ထပ် ဖို့တဲ့အခါ ရွှံ့ထဲကို သဲတွေနစ်ဝင်မသွားအောင် အတားအဆီး အဖြစ်သုးံပါတယ်။
* သူကိုဖြတ်ပြီးေ၇စီးဆင်းနိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတိရှိတာကြောင့် ရွှံ့ထဲမှေ၇များထွက်သွားနှုန်း (Consolidation rate) ပိုမိုမြန်စေ၇န်အတွက်လဲသုံးပါတယ်။ Prefabricated Vertical Drain (PVD) ကိုပတ်တဲ့အခါမှာလဲ သုံးပါတယ်။
ကွဲပြားပါတယ်။ Geotextile ကို ယက်လုပ်ပုံကို အခြေခံပြီး ၂ မျိုးကွဲပါတယ်။
အခုလို ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်။ မနက်က အမရေးပေးတာ ဖတ်ပြီး meetingမှာ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ရုံးမှာမို့ လို့ကျေးဇူးအသေးလေးပဲ ပေးခဲ့ရတာ။ ခုမှကျေးဇူးစကား သေချာပြောနိုင်တာပါ။geotextileကို ဆိုက်ထဲမှာ အသုံးပြုဖြစ် ခဲ့ရင်။အဲဒီအချိန်အထိ ဒီဆိုက်ထဲမှာ ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ သေချာထပ်တင်ပြပေးပါမယ်
Geotextiles ကအသုံးပြုပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျ ။ လက်ရှိမှာတော့ civil engineering အလုပ်တွေဖြစ်တဲ့ roads, airfields, railroads, embankments, retaining structures, reservoirs, canals, dams, bank protection, coastal engineering နှင့် construction site silt fences တွေမှာ အသုံးများပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Geotextiles တွေဟာမြေသားရဲ့ tension surface ပေါ်မှာတင်ခြင်းဖြင့်မြေသားရဲ့အားကိုမြှင့်ပေးခြင်း အားဖြင့်အသုံးပြုပါတယ်။ Geotextiles ကိုပင်လယ်ကမ်းခြေ sand bund တွေကို ရေလွှမ်းခြင်း၊ ဒီရေတိုက်စားခြင်း ၊ လှိုင်းပုတ်ခြင်း နှင့် လေတိုက်စားခြင်းတွေက ကာကွယ်ဖို့အတွက်လဲ အသုံးပြုပါသေးတယ်။ Geotextiles အသုံးပြုခြင်းရဲ့ အားသာချက်ကတော့ မြေသားရဲ့ strength ကို improve ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ soil nailing ပြုလုပ်ခြင်းထက် စရိတ်ပိုမိုသက်သာခြင်းပါပဲ။ ဒီအပြင် Geotextiles ခင်းထားတဲ့ မြေသားပေါ်မှာလဲသဘာဝအတိုင်း သစ်ပင်ပန်းမန် တွေကို စိုက်ပျိုးနိုင်ပါတယ်။
ဒါတင်မကသေးပါဘူး building demolition လုပ်တဲ့နေရာမှာလဲအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ demolition လုပ်မဲ့အဆောက်အဦး ရဲ့ column တိုင်တွေမှာ Geotextiles တွေကို steel wire နှင့် chain link တွေအသုံးပြုပြီး တွဲချည်ထားပါတယ်။ demolition လုပ်မဲ့အဆောက်အဦးကို explode လုပ်တဲ့အခါ explosive debris တွေကို Geotextiles ဖန်းထားပေးပါတယ်။ ဘာကြောင့် Geotextiles ကိုဒီနေရာမှာအသုံးပြုသလဲဆိုတာက Geotextiles ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ tensile strength ရှိလို့ပါပဲ။ ကြီးမားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ ကို chain link တွေကဖမ်းထားနိုင်ပြီးတော့ လွင့်ထွတ်လာတဲ့ အပိုင်းအစအားလုံးကို Geotextiles ကဖမ်းထားပေးပါတယ်။
Geotextiles အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက် erosion control အတွက်အသုံးအများဆုံးနှင့် popular အဖြစ်ဆုံးကတော့ Coir (coconut fiber) geotextiles ပါပဲ။ အကြောင်းကတော့ ကောင်းမွန်တဲ့ mechanical strength ရှိခြင်း၊ ၃ နှစ် ကနေ ၅ နှစ်ကြာတဲ့အခါ Coir geotextiles တွေဟာ humus အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ မြေဆီလွှာကိုအကျိုးပြုစေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Testing for the strength of Geotextiles in sand under static and dynamic loading
မြန်မာပြည်မှာဘယ်နေရာဒေသတွေမှာ အသုံးပြုထားပါသလဲ သိရင်ရှာပေးပါ.
မြန်မာပြည်တွင်းက Geotextile ကို သုံးပြီး လမ်းဆောက်လုပ်ရေးမှာ သုံးထားတာ သိတဲ့လူများ ကူကြပါ ။ ဒီလုပ်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်ရဲ့ အကူအညီ အကြံဥာဏ်တောင်းရသေးလား သိချင်ပါတယ်။
156 , 2nd Thiri Avenue,
Lower Kyeemyindaing Road, Ahlone Township,
မြန်မာပြည်မှာလည်း နေရာတော်တော်များမှာ သုံးနေပါ ပြီ။ အောက်ပါ company ကိုဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။သူတို့ရောင်းပါတယ်။ သူတို့မှာ Geotextile ကို မြန်မာပြည်မှာ သုံး ထားတဲ့ Project photo တွေလဲရှိပါတယ်။
Agricultural and Industrial Development Co.,Ltd
(95-1) 229826 , 212015, 223250, 212857